कतै मानसिक रोगीले नानीहरु पढाईरहेका त छैनन् , गाडी पो हाँकीरहेका छन् कि !
‘के होला त्यस्तो जसले तपाईंलाई खल्लो गरायो?’ मैले सोधें । ‘तिमी किन मानसिक रोगसम्बन्धी विषय पढेर आयौ? यो मैले बुझ्नै सकिनँ । यो यस्तो विषय हो जुन हामी नेपालीलाई त्यति आवश्यक नै पर्दैन । तिमीलाई त यस्तो विषय र व्यवसायबाट जीवन धान्न पनि धौ–धौ पर्ला है !’
मेरा आफन्तहरुले पनि यही निष्कर्ष निकालेर औकात अनुसार बिरामीलाई भारतको भेलोर पु¥याउने निर्णय लिएछन् । उनीहरुले काठमाडौंका एक वरिष्ठ चिकित्सकलाई भेटेर भेलोरका लागि रिपोर्ट लेखिदिन अनुरोध गरेछन् । डाक्टरले बिरामीको फाइल हेरेपछि अलि हिच्किचाउँदै भनेछन्, ‘तपाईंहरुले सबै विशेषज्ञलाई देखाए पनि एउटा विषय चाहिँ बाँकी नै रहेछ । भेलोर नै लाने भए पनि एकपटक मानसिक ... माफ गर्नुहोस् नसाको डाक्टरलाई पनि देखाउनुहोस् ।’
ती डाक्टरको सल्लाहपछि अन्ततः मेरा आफन्त त्यही दिन बिरामी लिएर सोझै मेरो घरमा आइपुगे । उनले मनको असजिलो लुकाउन खोज्दै भने, ‘तिमी मानसिक रोग मात्रै हेर्दैनौ हैन त? नसा रोगको पनि उपचार गर्छौ होइन ? तर, बिरामीको दिमाग त ठिकै छ जस्तो लाग्छ !’ बिरामी चिन्नै नसक्ने गरी दुब्लाएकी थिइन् । उनको अनुहार मलिन र उदासीन थियो । उनमा रोगका लक्षण नै अनगिन्ती थिए । शिरदेखि पाउसम्मै रोगबाट प्रभावित नभएको अङ्ग थिएन भन्दा पनि हुन्छ । टाउको दुख्ने, रिङ्टा लाग्ने, चक्कर लाग्ने, आँखा तिर्मिराउने, मुख सुक्ने, घाँटीमा केही अड्के जस्तो हुने, बेला–बेला मुटु बढी धड्केको अनुभव हुने, सास फेर्न गाह्रो जस्तो हुने, लामो सास लिन मन लाग्ने, पेटमा गोला हिँड्ने, कोखा दुख्ने, पेट पोल्ने, खान मन नहुने, कब्जियत हुने, पेट कहिल्यै सफा नहुने, हातखुट्टा झम्झमाउने, पोल्ने र चिसो–तातो हुने, छाला लाटो हुने, निद्रा राम्रो नलाग्ने, निदाउन खोज्दा एकैचोटि झस्केर ब्यँुझने र त्यसपछि ठ्याप्पै निद्रा नपर्ने, महिनावारी ठीक समयमा नहुने, ढाड दुख्ने आदि समस्या उनमा देखिए ।
मैले सोधपुछ गरेपछि अरू पनि थप समस्या थपिए– झर्को लाग्ने, रिस उठ्ने, केही गर्न मन नलाग्ने, झस्कने, डराउने, मनमा धेरै कुरा खेल्ने, बिहानीपख बढी नै दिक्क लाग्ने, दिन नै कसरी बिताउने होला जस्तो हुने, आधा दिनपछि चाहिँ केही हल्का हुने आदि । यति कुरा भनिसकेपछि मैले बिरामीलाई सोधेँ, ‘मन पनि कमजोर र चिन्तित छ, हो ?’ बिरामीले तुरुन्तै प्रतिवाद गर्दै भनिन्, ‘हैन, हैन..., मेरो मनलाई केही भएको छैन । भेलोर जानका लागि रिपोर्ट लिन ठूलो डाक्टर भनेर गएको, झन् उल्टो मलाई पागल ठानेर तिमीलाई भेट्न पो पठाइदियो ।’
मैले कुनै विरोध नजनाई सोधेँ, ‘चिन्ता लाग्ने, डर लाग्ने, केही गर्न मन नलाग्ने, झर्को लाग्ने पनि हुन्छ, हैन ?’ बिरामीले तुरुन्तै जवाफ दिइन्, ‘मलाई यस्तो रोग लागेर पो मेरो मन उदासीन र खिन्न भएको त । यो रोग ठीक भयो भने मेरो मन पहिले जस्तै भइहाल्छ नि !’ मेरा आफन्तले पनि पहिले नै ‘यसको मन निकै बलियो र सहनशील छ । यस्तो रोग लागेर पनि अझै हिम्मत हारेकी छैन’ आदि आदि भनिसकेका थिए । शरीरमा रोग लागेर रोगको पीरले मन कमजोर भएको नभई मानसिक उदासीनता, विरक्ति, दिक्दारीले गर्दा थुप्रै र अनेकथरी समस्या उनको शरीरमा जताततै देखिएका थिए । कति जनाले त उनलाई ‘रोग नै छैन, बहाना मात्रै गर्छे’ भनेर दोषारोपण पनि गरेका रहेछन् ।
मैले बिरामीलाई ढुक्क पार्ने उद्देश्यले भनेँ, ‘तपाईं नआत्तिनुहोस् यो दिमाग बिग्रने रोग हैन र तपाईंलाई डाक्टर साहेबले पागल भनेर मकहाँ पठाएको पनि हैन । काकीलाई थाहै छ नि, म नसासम्बन्धी रोगको पनि उपचार गर्छु । अहिलेसम्म तपाईंले नसाको डाक्टरलाई देखाउनुभएको रहेनछ । तपाईं आफँै भन्नोस् त, जे–जे कष्ट तपाईंलाई भएको छ, त्यस्तो सम्पूर्ण शरीर नै छुने रोग नसा रोगबाहेक अरू कुनै हुन्छ ? हाम्रा शरीरभरि नसा छरिएका हुन्छन् । नसा कमजोर भएपछि त्यसको असर जताततै पर्छ ।’ मैले जानी–जानी यसरी गवाँर पाराले अलिकति झुटो पनि बोलँ । उपचार गर्नका लागि मसँग अर्को विकल्प पनि थिएन । मैले उनलाई ‘तपाईं मानसिक रोगबाट पीडित हुनुहुन्छ’ भन्नुको परिणाम उनीबाट ठाडै उपचारको इन्कार निम्त्याउनु हुन्थ्यो । त्यससँगै हाम्रो सम्बन्ध पनि बिग्रन्थ्यो । तर, उनलाई नसाको रोग नै लागेको हो भन्ने अर्धसत्य कुराबाट बिरामीको मनमा प्रभाव प¥यो, ‘नसैले पो हो कि, मलाई यस्तो भाको, मलाई तिम्रो कुरा ठीकै लाग्यो’ उनले अन्त्यमा भनिन् ।
मानसिक अस्पतालमा प्रतिदिन औसत ७० देखि ८० जनासम्म बिरामी जँचाउन आउँछन् । तीमध्ये केही रोगको कारणले भन्दा पनि दुर्गम ठाउँबाट आएका र बाहिर बस्न नसक्ने हुँदा भर्ना भएका हुन्छन् । अरू कतिपय रोगभन्दा मानसिक रोगको उपचारको परिणाम प्रभावकारी र सन्तोषपूर्ण हुन्छ । मानसिक रोग–पागलहरु समेत) राम्रोसँग उपचार गरेपछि फेरि काम गर्न सक्ने र प्रगति पनि गर्न सक्ने हुन्छन् । यिनीहरुलाई बेकम्मा भइसकेको ठान्नु ठूलो भूल र दुर्भाग्य हो ।
छालामा दाद आएको एउटा रोगीलाई ‘यो कुष्ठरोग हैन, सामान्य छालाको रोग मात्र हो’ भन्दा उसले सहजै स्वीकार गर्छ । तर, मानसिक रोगीलाई ‘तपाईंलाई पागलपन हैन सामान्य मानसिक रोग लागेको रहेछ’ भन्दा उसले स्वीकार गर्न नचाहनु पनि मानवीय स्वभावको अनौठो रूप हो । ‘सामान्य रोग हो, पागलपन हैन’ भनेपछि ‘मेरो मनलाई सामान्य असर परेको रहेछ’ भनेर स्वीकार्न किन सकिँदैन ? अर्को कुरा, रोग, उपचार र परीक्षण भनेपछि हामी शरीरका अङ्गहरुलाई मात्र विचार गर्छौं । तर, सम्पूर्ण शरीरलाई परिचालन गर्ने जटिल र महङ्खवपूर्ण अङ्ग मनलाई हामी बिर्सन्छौँ । पेट जस्तो साधारण अङ्गमा त अनेकाँै रोग लाग्छन् भने मनजस्तो जटिल अङ्ग त्यत्तिकै रूपले प्रभावित हुनु अस्वाभाविक पनि त होइन । तर पनि, मनमा रोग लाग्नुलाई कुनै अभिशापको रूपमा लिएर होला हामी स्वीकार गर्न चाहँदैनौँ । यसरी साधारण रोग लागेको व्यक्तिले पनि अज्ञान र भ्रमपूर्ण विश्वासले गर्दा अनावश्यक दुःख पाउँछ र उसको समयमै उपचार हुन पाउँदैन । जसलाई आफ्नो रोगको सही जानकारी हुन्छ र मानसिक रोगी हुँ भनी स्वीकार गर्छ उसका लागि पनि उत्साहित भएर ढुक्क हुने स्थिति छैन ।
(मञ्जरी पव्लिकेसनले प्रकाशन गरेको मानसिक रोग विशेषज्ञ डा विश्ववन्धु शर्माको पुस्तक ‘मानसिक स्वास्थ्यका विविध अनुभव’को एक अंश हो यो । यसमा संकलित सामग्री निकै उपकारी र ज्ञानवध्र्दक ठानेर प्रकाशकसँगको सहमतिमा हामीले प्रकाशन गरेका हौं । पुस्तकका प्रत्येक अंश निकै उपयोगी छन्,जसलाई क्रमश प्रकाशन गरिने छ ।)
२०७५ माघ २५ शुक्रबार २०:५८:०० मा प्रकाशित